A Piece of Your Mind – Alpha Premium
Original name반의 반
StarringChae Soo-bin, Jung Hae-in, Kang Bong-sung, Kim Sung-kyu, Kim Woo-seok, Lee Ha-na, Lee Jung-eun, Lee Sang-hee, Lee Seung-joon, Woo Ji-hyeon, Ye Soo-jung
Synopsis of A Piece of Your Mind
A Piece of Your Mind (2020)ဇာတ်လမ်းတွဲ
အပိုငျး (၁ မှ ၁၂) ထိ စ/ဆုံး
Jang Hae Jinကတော့ AI programmerနဲ့ M&H Companyတညျထောငျသူ
Ha Wonဆိုတဲ့ တညျငွိမျအေးဆေးပွီး လူမှနျလူဖွောငျ့ အလုပျကို တိတိကကြလြုပျတတျတဲ့ လူငယျလေးတဈယောကျပါ….Chae Soo Binကတော့ အသံသှငျးအငျဂငျြနီယာမလေး တဈယောကျဖွဈပါတယျ…
ဒီစီးရီးက အခဈြနဲ့ ဟာသလေးတှပေါဝငျတဲ့ စီးရီးဖွဈပွီးတော့
artificial intelligence,classical music,engineer,
programmer စတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှနေဲ့ဖှဲ့စညျးထားတာပါ…
မငျးသားရော မငျးသမီးရော ခဈြစရာကောငျးတဲ့အပွငျ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့အခဈြဇာတျလမျးတှဲလေးဆိုပါတော့…..
၁၆ပိုငျးပါဝငျမှာဖွဈပွီး Romance Comedyအမြိုးအစားဖွဈပါတယျ….
ခေါငျးဆောငျမငျးသားဖွဈသူကတော့ Jang Hae Jin(Something in the rain, One spring night တို့မှာ အပွုံးတှနေဲ့ ပရိသတျအခဈြကို အပိုငျသိမျးသှားတဲ့သူကွီး)နဲ့ မငျးသမီးဖွဈသူ Chae Soo Bin (I’m notaRobot)တို့က အဓိက ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ…..
Jang Hae Jinကတော့ AI programmerနဲ့ M&H Companyတည်ထောင်သူ
Ha Wonဆိုတဲ့ တည်ငြိမ်အေးဆေးပြီး လူမှန်လူဖြောင့် အလုပ်ကို တိတိကျကျလုပ်တတ်တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပါ….Chae Soo Binကတော့ အသံသွင်းအင်ဂျင်နီယာမလေး တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီစီးရီးက အချစ်နဲ့ ဟာသလေးတွေပါဝင်တဲ့ စီးရီးဖြစ်ပြီးတော့
programmer စတဲ့ အ‌ကြောင်းအရာများနဲ့ စည်းထားတာပါ…
မင်းသားရော မင်းသမီးရော ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဆိုပါတော့…..
၁၆ပိုင်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Romance Comedyအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်….
ခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်သူကတော့ Jang Hae Jin(Something in the rain, One spring night တို့မှာ အပြုံးတွေနဲ့ ပရိသတ်အချစ်ကို အပိုင်သိမ်းသွားတဲ့သူကြီး)နဲ့ မင်းသမီးဖြစ်သူ Chae Soo Bin (I’m notaRobot)တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်…..
ProductionMovierock, Studio Dragon, The Unicorn
Firt air date2020-03-23
Last air date2020-04-28
Home PageA Piece of Your Mind
1 A Piece of Your Mind - Season 1
A Piece of Your Mind 1x1 2020-03-23